25 Zvino shoko raJehovha rakaramba richiuya kwandiri, richiti: 2 “Mwanakomana womunhu, tarira nechokuvanakomana vaAmoni, uvaprofitire.+ 3 Uti pamusoro pevanakomana vaAmoni, ‘Inzwai shoko raChangamire Ishe Jehovha. Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Zvamakati tsvatu waro! pamusoro penzvimbo yangu tsvene, nokuti yasvibiswa, uye pamusoro penyika yaIsraeri, nokuti yava dongo, nepamusoro peimba yaJudha, nokuti vatapwa,+ 4 naizvozvo tarirai ndichakuisai kune Vokumabvazuva kuti muve vanhu vavo,+ uye vachamisa misasa yavo ine masvingo pakati penyu uye vachavaka tebhenekeri dzavo pakati penyu. Ivo vachadya zvibereko zvenyu, uye ivo vachanwa mukaka wenyu.+ 5 Ndichaita kuti Rabha+ rive mafuro engamera uye ndichaita kuti vanakomana vaAmoni vave nzvimbo yokuzororera yemakwai;+ uye imi muchaziva kuti ndini Jehovha.”’”+ 6 “Nokuti zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Zvamakaombera,+ mukatsika netsoka dzenyu uye mukaramba muchifara nokuzvidza kwenyu kwose nyika yaIsraeri mumweya yenyu,+ 7 naizvozvo tarirai; ndakutambanudzirai ruoko rwangu,+ ndichakuisai kune mamwe marudzi kuti muve chinhu chokupamba; uye ndichakubvisai pakati pemamwe marudzi ndokuparadzai panyika dzacho.+ Ndichakutsakatisai,+ uye muchaziva kuti ndini Jehovha.’ 8 “Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Moabhi+ neSeiri+ zvadzakati: “Tarirai! Imba yaJudha yakaita semamwe marudzi ose,”+ 9 naizvozvo tarirai ndichavhura nzvimbo yakatenuka yaMoabhi iri pamaguta, iri pamaguta ake ari nechokumuganhu kwake, iko kushongedzwa kwenyika yacho, Bheti-jeshimoti,+ Bhaari-meyoni,+ kunyange kusvikira kuKiriyataimu,+ 10 kune Vokumabvazuva,+ pamwe chete nevanakomana vaAmoni;+ uye ndichaita kuti ive yavo, kuti irege kuyeukwa,+ ivo vanakomana vaAmoni, vari pakati pemamwe marudzi. 11 Ndichaita zvandakatonga muMoabhi;+ uye ivo vachaziva kuti ndini Jehovha.’+ 12 “Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Edhomu zvayakatsiva imba yaJudha, vakaramba vachiita zvakaipa kwazvo, vakavatsiva,+ 13 naizvozvo zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Ndichatambanudzirawo Edhomu ruoko rwangu+ ndoparadza vanhu nezvipfuwo zviri mairi,+ uye ndichaiita nzvimbo yakaparadzwa kubvira kuTemani,+ kusvikira kuDhedhani.+ Vachaurayiwa nebakatwa. 14 ‘Ndichatsiva Edhomu ndichishandisa maoko evanhu vangu vaIsraeri;+ uye vachaitira Edhomu zvinoenderana nokutsamwa kwangu uye zvinoenderana nehasha dzangu; uye vachaziva kuti kutsiva kwangu chii,’+ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha.”’ 15 “Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘VaFiristiya zvavakatsiva,+ vakaramba vachitsiva nokutsiva kune kuzvidza mumweya yavo, kuti vakonzere kuparadzwa,+ noruvengo rusingagumi,+ 16 naizvozvo zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Tarirai ndichatambanudzira vaFiristiya ruoko rwangu,+ uye ndichaparadza vaKereti+ ndoparadza vamwe vose pamhenderekedzo yegungwa.+ 17 Ndichaita mabasa makuru okutsiva pakati pavo, nokutsiura nehasha;+ uye ivo vachaziva kuti ndini Jehovha pandinovatsiva.”’”+